LeEco LETV S3, fanadihadiana sy hevitra | Androidsis
LeEco dia te-hanana toerana eo amin'ny tsenan'ny telefaona. Ny mpanamboatra dia niditra tao Eropa noho ny vahaolana toy ny Le Pro 3 na ny LeEco LETV S3, telefaona azonao vidiana fipihana eto 98 euro fotsiny ary gaga amin'ny sandan'ny vola.
Izany no antony nanararaotanay nanangana terminal misy fitaovana matanjaka sy famolavolana tena manintona izay mametraka azy eo amin'ny laharana voalohany raha mitady telefaona manana hery mihoatra ny ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa amin'ny vidin'ny fandravana ianao.
Mikasika ny volavola hitantsika izany ny LeEco LETV S3 dia mitovy amin'ny maodely Pro 3, na dia misy fahasamihafana kely aza. Ary ny famolavolana ankapobeny, miaraka amin'io fakantsary eo aloha io sy ilay sensor ho an'ny hazavana mampiavaka azy, ankoatry ny fantsom-panaovan-tsoratry ny rantsan-tànana miaraka amina famaranana metaly dia mampitovy azy amin'ilay maodely avo lenta.
Amin'ny ankapobeny, ny famolavolana ny LeEco LETV S3 tsy misongadina mihitsyToa finday taloha aza io, fa terminal iray tsy mihoatra ny 120 euro no resahina, ka tsy afaka mangataka zavatra betsaka amin'izany.
Na izany na tsy izany, misy antsipiriany sasany momba ny endriny izay hitako fa tena mahaliana. Hanomboka amin'ny firesahako ny mampiavaka ny bokotra capacitive, izay tsy miseho raha vao manindry ny faritra ambany. Manamora ny alohan'ny fitaovana ity rafitra ity raha miaro ny habaka efijery betsaka araka izay tratra.
Na eo aza ny fananana a Efijery 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD, ny telefaona dia tsy lehibe loatra ary ny hateviny 7.5 mm dia mahatonga ilay fitaovana hahatsapa ho tena tsara ao an-tànany.
Ny vatan'ny LeEco LETV S3 dia vita amin'ny aliminioma miaraka amina plastika, zavatra antenaina amin'ny telefaona miaraka amin'ireo toetra ireo, na dia mila milaza aza aho fa tena tsara ny fahatsapana eo am-pelatanana, manolotra fikitika mahafinaritra sy fahatsapana mahafinaritra ny mateza. Angamba ny teboka ratsy indrindra dia ny lanjany:Gramin'ny 153. Mazava be ny telefaona ary manome ny fahatsapana ho vokatra kilalao, na dia tsy maintsy milaza aza aho fa efa zatra mampiasa finday avo lenta ka io foana no tsapako.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny LeEco LETV S3 no ahitantsika ny lakilen'ny fanaraha-maso sy ny bokotra herin'ny telefaona. Famaritana mahazatra ao amin'ny terminal Shinoa ary mandeha tsara izany. Ny milaza fa ny fanoherana ny tsindry dia mihoatra ny marina ary ny bokotra rehetra dia manolotra làlana tsara.
Ny ilany havia no ahitantsika ny slot SIM karatra ary tsy misy zavatra hafa satria madio io faritra io. Eo amin'ny farany ambany dia mahita fahatairana lehibe isika mahita seranana USB karazana C. Ny finday amin'ity vidiny ity dia misy ifandraisany amin'ity karazana ity dia teboka iray manohana azy. Eo akaikin'ity seranana ity dia ho hitantsika ny fivoahan'ny mpandahateny sy ny mikrô an-telefaona an-telefaona.
Te-hiloka be i LeEco amin'ny alàlan'ny fanesorana ny fivoahan'ny headphone. Eny, ny LeEco LETV S3 dia tsy manana output 3.5mm. Ny mpanamboatra dia miloka fiezahana mafy hanaraka ireo mpifaninana aminy, fa raha jerentsika ny hateviny, heveriko fa tsy tokony ho naka ny tifitra izy ireo. Mazava ho azy, ny boaty vokatra dia misy fenitra miaraka amina adaptatera hampifandray izay headset amin'ny alàlan'ny port USB Type C an'ny fitaovana. Zavatra izany.
Ao aoriana dia ho hitantsika ny sensor sensor amin'ny dian-tànana eo akaikin'ny fakantsary lehibe amin'ilay fitaovana. Telefaona misy famolavolana tena tsotra izay tsy miavaka amin'ny ambiny fa manolotra fikitika mahafinaritra, ankoatry ny fihazonana tsara eo am-pelatanany.
modely LETV S3 X22
Android 6.0 sosona voajanahary miorina
5.5-inch 2.5D IPS LCD miaraka amin'ny famaha Full HD 401 dpi
ram 3 GB karazana LPDDR3
Tahiry anatiny Fahatsiarovana anatiny 32 GB raha tsy misy ny fanitarana azy
16 MPX miaraka amina aperture afovoany 2.0 izay manolotra aminay ny famahan-tsary farafaharatsiny 4160 x 3120 - Horonantsary horonantsary FullHD amin'ny 30 fps sy stabilizer sary optika - FlashLED
Fakan-tsary aloha 8 MPX miaraka amina sary faran'izay betsaka 2560 x 1920 sy horonantsary horonantsary HD
Conectividad Dual SIM: Micro Sim plus Nano Sim - 2G: GSM B2 / B3 / B8 CDMA: CDMA 2000 / 1X BC0 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34 / B39 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 TDD / TD-LTE: TD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 (2555-2655MHz) - Bluetooth 4.2 - Wifi 2.4 Ghz ary 5 Ghz - GPS sy aGPS GLONASS ary BEIDU - - USB OTG
Fitaovana hafa Mpamaky fanontana
3.000 mAh miaraka amina rafitra 3.0 fiampangana haingana
lafiny 151.1 x 74mm x 7.37mm
lanja 151 grama
vidiny Tolotra 98 euro amin'ny TomTop
Tonga ny fizarana fampisehoana nanokatra adihevitra mafana nandritra ny volana vitsivitsy teo amin'ny latabatra. Androany dia saika ny telefaona antonony rehetra dia afaka mamindra izay lalao na rindranasa tsy misy olana na firy na firy ny enta-mavesatra ilainy ary, raisina izany ny LeEco LETV dia manasongadina processeur Helio X20, antenaina fa mandeha tsara ny telefaona, ary misy izany.
Ny iray amin'ireo pitsopitsony ao amin'ny LeEco LETV dia ny tsy fampidirana bloatware azy loatra izay midika fa tsy dia be loatra ny rafitra, mamela ny terminal hiasa tena milamina.
ny processeur Helio X20 Izy io dia SoC afovoany midadasika avy amin'ny MediaTek izay manolotra atiny folo mizara ho clusters telo izay navitrika sy nanala arakaraka ny fahefana ilaina. Cores avo roa heny amin'ny 2,3GHz, atiny efatra hafa amin'ny 1,9GHz, ary vondrona farany misy core efatra amin'ny 1,4GHz. CPU mahery vaika izay, na izany aza, lanin'ny GPU GPU quad-core. Aiza no hahitantsika izany tsy fahampiana izany? Raha ny filalaovana no resahina.
Amin'ny tranga LeEco LETV S3, afaka mihazakazaka fampiharana mavesatra sy mitaky izay haingana ny fanombohany nefa, na izany aza, dia mampiseho fahatarana kely rehefa mandroso amin'ny multitasking isika. Na dia tena tsara aza ny traikefa amin'ny app, saika mitovy amin'ny an'ny rafitra fandefasana mihitsy, ny fanovana fampiharana hafa misokatra dia somary mankaleo ihany amin'ny fisehoan'ny LAG kely. Tsy misy zavatra mahafinaritra, indrindra raha raisinao fa tsy mitentina 100 euro akory ny telefaona, fa antsipiriany izay tiako horesahina. Mazava ho azy, afaka nilalao kilalao tsy nisy olana aho.
Izay nandiso fanantenana ahy, ary betsaka, ity LeEco LTV S3 ity dia rehefa mampiasa ny mpamaky ny rantsantanana. Ny mpamaky biometrika dia tsy nahomby matetika loatra ka lasa tsy nampiasa azy aho. Tsy antenaiko ny telefaona latsaky ny 100 Euros ho avy miaraka amina mpamaky rantsantanana, fa raha mampifangaro azy io dia miasa izy farafaharatsiny. Famelezana tsara ny tanana amin'ny ekipa LeEco amin'io lafiny io.
Soa ihany fa ny mpandahateny mahery vaika amin'ny fitaovana dia manonitra ny tsy fahombiazan'ny mpamaky ny dian-tànana. Ary izany ve ilay LeEco LETV S3 Gaga be aho noho ny kalitaon'ny feo avo atolotry ny fitaovana. Tena tsara ny faran'ny terminal manome kalitao tsara lavitra noho ny nandrasana, mankafy atiny multimedia marobe nefa tsy mampiasa headphone.
Antenaiko fa hisy ilay feo am-bifotsy raha mihaino mozika aho fa tsy maintsy milaza an'izany aho ny mpandahateny ny LeECO LETV S3 dia manolotra kalitao tena tsara hatramin'ny 80% ny feony ambony indrindra, nanomboka teo dia manomboka malemy kely izy. Saingy amin'ny habetsaky ny 80% ny kalitao sy ny herin'ny feo dia mihoatra ny ampy.
Ary tsy afaka manadino ny efijery misy azy, vita amin'ny takelaka IPS 5.5 santimetatra mahatratra 401 teboka isaky ny santimetatra (dpi). Tontonana manome kalitao avo lenta, mazava sy maranitra ary loko voajanahary izay manasa anao hankafy atiny multimedia amin'ny orinasa. Bebe kokoa raha raisintsika fa ny telefaona dia manana haavo mamiratra mihoatra ny marina sy ny zoro fahitana tena tsara.
Ny batterie LeEco LETV dia mamely ahy ho somary ara-drariny. Ny telefaona misy ireo toetra ireo dia tokony hanana bateria matanjaka kokoa, na dia mety haharitra iray andro fizakan-tena tsy misy olana aza izy io, ny telefaona manana ireo toetra ireo dia tokony hanana bateria 4,000 mAh.
Farany lazao fa ny cFakan-tsary 16 megapixel aoriana Tsara fitondran-tena izy io, manome fampisehoana tsara raha mbola ao anaty tontolo mirehitra mazava isika, ary amin'ny toe-jiro maivana dia eo no iseho ilay tabataba mahatsiravina. Na izany na tsy izany, raha mbola miasa amin'ny toe-jiro maivana isika, dia tena ho tsara amin'ny sary maranitra sy tena izy ny sary.
Ny rindrambaiko fakantsary an'ny LeEco LETV dia tena mahavariana manolotra karazana fiasa mahaliana izay hahafaly ny mpaka sary. Ny safidy toy ny maody panorama ankoatry ny hafa dia manokatra fari-javatra mahaliana manome lanja bebe kokoa ny fakantsary tena feno. Mariho ihany koa fa ny fakan-tsary eo anoloana dia misy 8 megapixels, mihoatra ny ampy hividianana selfie kalitao na sary-tena.
Miasa mahafaty ny sensor fantsom-bava
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » LeEco LETV S3, fanadihadiana sy hevitra